Mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub oo wada xaajood kula jirta Barcelona si ay uga qaadato Memphis Depay – Gool FM
Mid ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub oo wada xaajood kula jirta Barcelona si ay uga qaadato Memphis Depay
(Barcelona) 13 Jan 2022. Mustaqbalka Memphis Depay ee naadiga Barcelona ayaa durba shaki weyn la gelinayaa xilli uusan xitaa weli dhammeysan xilli ciyaareedkiisii ugu horreeyay ee Camp Nou, waxaana haatan lasoo warinayaa inay Barca wada xaajood ku aaddan laacibkan kula jirto naadiga Juventus iyadoo naadiga Taliyaaniga ah ay amaah ku dooneyso weeraryahanka reer Netherlands.
Imaanshaha Ferran Torres iyo soo laabashada Ansu Fati ayaa la warinayaa inay soo koobi karto fursad ciyaareedkka Depay qaybta dambe ee xilli ciyaareedkan taasoo sidoo kale calaamad su’aal weyn saartay mustaqbalkiisa.
Suxufiga Taliyaaniga ah ee Gianluca Di Marzio kaasoo ka faalooda arrimaha suuqa kala iibsiga ayaa sheegay inay Bianconeri wada xaajood ay kula jirto dhiggeeda reer Spain si ay uga dhaadhiciso inay heshiis amaah ah kaga soo qaadato 27-sano jirkan iyadoo dooneysa inay ku daboosho booska Federico Chiesa oo inta ka harsan xilli ciyaareedkan ku maqnaan doona dhaawac daran oo kasoo gaaray jilibka.
Si kastaba ha ahaatee, Depay oo xalay kasoo laabtay dhaawac ciyaartii El Classico ee nadigiisa la garaacay ayaa heysta qandaraas uu ka harsan yahay sanad iyo bar, mana cadda qorshaha Barcelona ee ku aaddan mustaqbalka laacibkeeda.
Kooxdee ayaa haatan hoggaanka u heysa raacdada loogu jiro saxiixa xiddiga Manchester United ee Paul Pogba?
Mid ka mid ah wargeysyada ugu caansan dunida oo baahiyay inay Man United si qarsoodi ah xiriir ula sameyso macallinka ay dooneyso inay magacowdo xagaaga